🥇 ▷ Samsung horeyba waxay u leedahay Samsung diyaaradeeda Galaxy A30s iyo A50s ✅
Samsung horeyba waxay u leedahay Samsung diyaaradeeda Galaxy A30s iyo A50s
Shalay Samsung ayaa daaha ka qaaday Samsung Galaxy A10s cusub, oo ah moodel la hagaajiyay isla markaana leh batari badan oo loogu talagalay Samsung Samsung Galaxy A Series 2019. Hadda sumadda ayaa diyaarinaysa taleefanno cusub si loo kordhiyo qoyska iyo badhtamaha. Shirkadda Kuuriya ayaa soo saari doonta moodooyinka “S” ee ugu weyn Moodooyinka Samsung noocyada kala duwan ee Galaxy TO. Moodooyinka hagaajinta ah ee dhowaan imaan doona oo kuwaa hore u soo maray tilmaamo.
Qaar ka mid ah moodooyinka Samsung Galaxy Waxay soo mareen shahaadada Wi-Fi Alliance waxayna taas uga mahadcelin kartaa waxaan ka heli karnaa tilmaamo ku saabsan. Kaliya way caddeeyeen Samsung Galaxy A30s iyo Samsung Galaxy A50s sidaa darteed waxaa la filayaa in taleefannada mobilada ah aysan qaadan doonin waqti dheer in la yimaado oo si rasmi ah loogu soo bandhigo suuqa.
Samsung Galaxy A30s iyo A50s
Gudbinta taleefannada iyada oo loo marayo caddeyn waxay cadeyneysaa in Samsung ay horeyba uga shaqeynayeen moodooyinkaas laakiin sidoo kale in la filayo toddobaadyada soo socda. Marka loo eego Samsung Galaxy A30s waxaa la yimid nambarka nooca ‘sm-A307FN / DS’ oo Samsung A50s ay la imanayaan nambarka nooca ‘SM-A507FN / DS.
Kaararka ma muujinayaan dhammaan faahfaahinta farsamo ee labada marin laakiin waxaan ognahay inay lahaan doonaan laba-labo awood Wi-Fi taasina waxay la shaqeyn doontaa Android 9 Pie sida nidaamka hawlgalka bilaabista.
Marka loo eego qiyaasaha khubarada, Samsung-ga cusub ee Samsung A30s wuxuu imaan doonaa in kabadan 4,000 mAh oo batteriga ah oo ka badan nooca hadda jira. Aniguna waxaan ku doodi lahaa qaabeynta kamarado saddex-geesoodka ah, marka la barbar dhigo laba kamaradaha A30. Waxay sidoo kale suurta gal noqon laheyd in taleefankan uu ku tuuro Exynos 7885 chip oo leh 3 iyo 4 GB noocyo ah RAM inkasta oo aan xaqiijineyno waa inaan sugnaa dhowr isbuuc si Samsung ay si rasmi ah u bilowdo taleefannadeeda cusub.
Samsung Galaxy A50s tWaxaa sidoo kale la rajeynayaa horumar kaamarada ah iyo wadar ahaan afar dareemayaal xagga dambe ah, sida mobilada kale ee sumadda. Batteriga wuu sii weynaan lahaa, marka loo eego isbedelka Samsung, ugu yaraan waxaan haysan laheyn 4,500 mAh in ka badan oo ku filan oo aan ku qaban karno wax ka badan hal maalin isticmaalka hal kicitaan ah.
Muddo toddobaad ah waxaan ogaan doonaa faahfaahinta oo dhan Taleefannadan oo durba diyaar u ah inay bilaabaan. Marka ay diyaar ahaadaan, waxaan kuu sheegi doonaa dhammaan muuqaaladooda rasmiga ah iyo sida ay u wanaajinayaan qaabka hadda jira.
Iibso Samsung Galaxy A40
Iibso Samsung Galaxy A50
Iibso Samsung Galaxy A70